မင်ဂလာပါးးးးးး — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited January 2009 in မိတ်ဆက်
ကျနော်လည်းခင်ပါတယ်ဗျာ ... ကြိုဆိုပါတယ်။
ကြိုဆို ပါတယ် ။:6::6:
Welcome to our place.:)
မင်္ဂလာပါ။ mzမှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။:6::6::6:
အနော် မောင်ပြုံးမှလည်း ကြိုဆိုကြောင်းပါခင်ဗျာ
မင်္ဂလာ ပါ မရွှေအိမ်စည် :d
ဂျစ်ပဆီလေးမှ မရွှေအိမ်စည်ကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား
မရွှေအိမ်စည်ဆိုတော့ ရေကျော်က များလားဟင် ဟီးဟီး။ မဟုတ်ရင် စောရီးနော် အနော်က ဒီလိုပဲ ပြောနေကြဆိုတော့ အကျင့်ပါနေလို့။ မရွှေအိမ်စည် ဒီမှာပျော်သွားမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆို အပေါ်က ကိုကိုတွေ တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါသူတို့တွေ ဝိုင်းဖျော်ကြလိမ့်မယ်။:d မင်ဂလာပါ မရွှေအိမ်စည်ရေ။:6:
အနော်ရထာ...ရွှေအိမ်စည်...ကျန်စစ်သားနှင့် ငလုံးလဖယ် ပဲကျန်တော့တယ်ထင်တယ်.:p
အနော်ရထာ နဲ့ ရွှေအိမ်စည်.တော့လာပြီ..
ကျန်စစ်သားနှင့် ငလုံးလဖယ် ပဲကျန်တော့တယ်..:p
Haveagreat time with MZ:3:
ခင်လို့ရပါတယ်နော်.. ကျွန်တော်ကလည်း အင်တာနက်ထဲမှာ မျက်စိလည်နေလို့..
ကြိုဆိုပါ၏။ let's share zillions of knowledges.
မင်္ဂလာပါ .... ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ......
Haveanice day ..... :103: